प्रचण्डका घरबेटीको काम-जहाँ ठेक्का लियो त्यही अलपत्र, सिरियामा फसेकी चेलीका बुबा सम्पर्कमा ! (भिडियोसहित) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / प्रचण्डका घरबेटीको काम-जहाँ ठेक्का लियो त्यही अलपत्र, सिरियामा फसेकी चेलीका बुबा सम्पर्कमा ! (भिडियोसहित)
प्रचण्डका घरबेटीको काम-जहाँ ठेक्का लियो त्यही अलपत्र, सिरियामा फसेकी चेलीका बुबा सम्पर्कमा ! (भिडियोसहित)
Anurag Post June 5, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, प्रवासी, भिडियो, राजनीति Leaveacomment 239 Views
प्रतिनीधि सभा वैठकमा सांसद कलुदेवी विश्वकर्माको अभिव्यक्ति बारे आज चर्चा गर्न चाहन्छु । दलित भएकै कारण आँफुले काठमाडौंमा डेरा नपाएको दुखेसो सांसद विश्वकर्माले संसदमा पोखिरहँदा यो समाजको यर्थाथ चित्रण भएको छ ।
जातिय विभेद विरुद्ध कानुन भएपनि व्यवहारमा कस्तो छ भन्ने कुराको प्रष्ट चित्रण हो सांसद विश्वकर्माको डेरा अनुभव । एउटा जनप्रतिनिधी, सांसद जस्तो मानिसलाई त यति विभेद गरिन्छ भने दुर दराजबाट काठमाडौंमा डेरा माग्ने अन्य दलित समुदायको के हाल भएको होला ?
समाजको यो विभेद नहट्नु पछाडिको प्रमुख कारण हो बर्षौ अघि तपाई हामीलाई विभेदको इन्जेक्सन लगाइएको छ । यो इन्जेक्सनको प्रभाव सजिलै जाँदैन । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि भाषण मा अथवा समाजमा जातभात केही हैन भन्ने, जातिय भेदभावको विरोध गर्नेहरु अधिकांश डलब स्ट्याण्र्ड हुन्छन् ।
आजको जमानामा जात भातको कुरा गरेर हुन्छ भन्नेहरु घरमा छोराछोरीलाई दैनिक तर्साउने प्रकृतीका हुन्छन र भन्ने गर्छन ।
आँफु भन्दा तल्लो जातको मानिसलाई रेजिस भने तेरो खुट्टा भाँचिदिन्छु । जब सम्म समाजमा दिइने शिक्षा र घरमा दिइने शिक्षा फरक हुन्छ तबसम्म संसद कलुदेवी विश्कर्माका घरबेटीहरु साँचोको झुप्पा सँगै एउटा मर्म वेदी प्रश्न लिएर ढोकामा उभिन्छन् ।
सिरियाबाट रुदै भिडियो पठाउने युवतीको परिवार हाम्रो सम्पर्कमा, नेपाल फर्काइदिन आग्रह
काठमाडौं । एक नेपाली चेली जो दलालको फन्दामा परेर सिरिया पुगिन् । दुबई लान्छु भन्दै दलालले सिरिया पु¥याएपछि साहुले बन्दक जस्तै बनाए र दिनुहुँ याताता दिन थालेपछि पिडा खप्न नसकेपछि आफ्नो पिडा भिडियो मार्फत सार्वजनिक गरिन् । जुन वेदनाले भरिएको भिडियो हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा प्रसारण ग¥यौं ।
उनको त्यस भिडियो प्रशारण गरेसंगै उनको परिवार हाम्रो प्रदेश नम्बर १ स्थित ब्युरोको सम्पर्कका आएका छन् । उनी धनकुटा जिल्लाको मुर्तिढुगां गाविस हालको महालक्ष्मि नगर पालिका ९ की कल्पना दर्जी रहिछन् । आर्थिक अवस्था कमजोर २९ वर्षिया कल्पना धरान १६ स्थित सीता अधिकारी थापाको घरमा काम गर्न बस्दै आएकी थिइन् । तर विगत १ बर्ष देखि परिवारको सम्पर्कमा समेत नरहेको उनी सिरिया अलपत्र भएको सार्वजनिक भएपछि मात्र उनका वुवा लाल बहादुर दर्जीेले थाहा पाए ।
अहिले उनका ६४ वर्षिय वृद्ध वुवा आफ्नी छोरीलाई सकुशल नेपाल फर्काइदिन आग्रह गर्दै भौतारिरहेका छन् । आफ्नी छोरीलाई नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि कुवेत बसेर आएको र पुन धरानमै सिता थापा अधिकारीको घरमानै बस्तै आएकी आफ्नी दिदि सिरिया पुगेको उनको भिडियो आएपछि मात्र थाहा पाएको उनका दाजु दुर्गवहादुर दर्जी बताउँछन् ।
२०७३ सालमा भदौ १३ गते धनकुटा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पुगेर नागररिकताको प्रतिलिपि निकालेर कल्पना विदेश गएको भए पनि जसको घरमा वसेको सीता थापा उसले आफुहरुलाई खवर समेत नगरेको उनको भनाई छ । बहिनीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आफु सीता थापा अधिकारीको घरमा गएको भए पनि कल्पना आफै गएको भन्दै सीताले आफुलाई थाहा नभएको बताएको दुर्गाबहादुर बताउछन् ।
कल्पनालाई धरानबाट पुर्वीे नाका काँकरभिट्टा हुदै भारतको राजधानी दिल्लीहुदै सिरिया पु¥याइएको हो । सामान्य आर्थिक अवस्था भएको उनको परिवार उनका दाजु सुनसरीको दुहवीमा मजदुरी गर्छन भने वृद्ध बुबा गाउँमै कपडा सिलाउने काम गर्छन ।
जानकी मेडिकल कलेजमा चरम लापरवाही, १ महिना देखि पढाई ठप्प
धनुषा । धनुषाको रमदैयामा संचालित जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्दै गरेका ३ सय विद्यार्थीको बिचल्ली भएको छ । कलेज प्रशासनको चरम लापरवाही र चिकित्सा अध्ययन संस्थानको बेवास्ता कारण जानकी मेडिकल कलेजमा १ महिना देखि पढाई भएको छैन ।
साथै अस्पतालमा ताला लागेको छ भने विद्यार्थीले खाना खाने कलेको क्यान्टीन समेत बन्द भएको छ । विद्यार्थीको अध्ययन देखि दैनिक खाना बस्न समेत समस्या भैरहेको छ । कलेज संचालकले १४ महिना देखि कर्मचारीको तलब नदिएकोे भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । कलेज संचालक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आईओएम तथा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीका कारण आफुहरु बिचल्लीमा परेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।
एमबीबीएस अन्तीम बर्षका विद्यार्थीको परीक्षा समेत आइओएमले स्थगित गरेको छ । नयाँ व्याचका विद्यार्थीहरुले समेत २ महिनामात्रै पढ्न पाएका छन् । आइओएम मार्फत ८ जना छात्रवृत्ती बाहेक सशुल्कु पढ्ने नयाँ व्याचका ४९ जना विद्यार्थीले प्रतिव्यक्ति १५ लाख बढी बुझाइ सकेका छन् ।
कलेज संचालक समीतिका अध्यक्ष डिल्लीराज पौडेल तथा एमडी राजेश थापा लामो मसयदेखि कलेज सम्पर्कमा नरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
यस अघिका बर्षदेखि नै अस्तव्यतस्त रहेको मेडिकल कलेजको बारेमा जानकार हुँदा हुँदै पनि आइओएमले विद्यार्थी पठाएर बिचल्ली पारेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
शैलुङ कन्ट्रक्शनले तोकिएको समयमा कुनै पनि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन
काठमाडौं । नागढुङ्गा कंलकी सडक खण्डमा यात्रा गर्ने हरेक यात्रुले सोच्ने एउटै कुरा हो, यो सडक निर्माण कहिले सम्पन्न होला र आनन्दसँग यात्र गर्न पाइएला । अझै सबैले खोज्ने भनेको यात्रुलाई सास्ती हुने सडक निमार्णको जिम्मा लिने को होला भनेर । यो सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको देशकै नम्बर एक निमार्ण कम्पनी दावी गर्ने शैलुङ कन्सट्रक्सन हो ।
यो सडकका विभिन्न भाग छुट्याएर अन्य निर्माण कम्पनीहरुसँग शैलुङ कन्सट्रक्सनले जोइन्टभेन्चर कम्पनीसँग सहकार्य गरे पनि मुख्य जिम्मेवार भने शारदा अधिकारीको शैलुङ कन्सट्रक्सन नै हो । अधिकारी यति शक्तिशाली व्यक्ति हुनकी उनले तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई घरमै बोलाई लच्च र डिनर मिटिङ गराए । अहिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अधिकरीको खुम्मलटारको घरमा भाडामा बसेका छन् ।
अब कलंकी नागढुंगा बाटोको कुरा गरौ । कलंकीदेखि ३ किलोमिटर अघिसम्मको सडक शर्मा शैलुङ कान्छाराम जेभीले २०७४ असोज सम्म निर्माण सक्नु पर्ने थियो । यसपछिको तीन किलोमिटर सडक लुम्बिनी शैलुङ साप जेभीले जिम्मा लिएको छ । नागढुंगातर्फको सडक शर्मा शैलुङ कान्छाराम जेभीले निर्माण गर्दैछ । यो सबै काम ढिलासुस्त हुनको दोष निर्माण कम्पनी राज्यका निकाय र सर्वसाधारणको अवरोध देखाउँछ ।
यस्तै ललितपुरको ढोलाहिटी सुनकोठी चापागाउँ हुँदै लेले सडक, कमल विनायकबाट भत्केकोपाटी हुँदै नगरकोट जाने बाटो, भक्तपुरको बिष्णु कुण्डली सिद्धीकाली सडकमा पनि शैलुङसँगै, वनस्थली बालाजुचौकी हुँदै बोहराटार सडकखण्ड, गोपीकृष्ण हलदेखि कपनसम्म धोबीखोला करिडोर निर्माणको काममा पनि शैलुङ कन्सट्रक्सन लिएको छ ।
ठुलो राजनीतिक संरक्षण पाएका शारादा अधिकारीको कन्सट्रक्सन कम्पनिले कुनै काम समयमा पुरा गरेको छैन् ।
अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप हालेपछि सडक पुर्नेदेखि सडक बनाउनेसम्म दर्जनौं ठेक्का पाएको छ । उपत्यकाका धेरै आयोजनको जिम्मा लिएको शैलुङले कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गरेको रेर्कड छैन ।
Previous विद्यालयको हविगत कन्तविजोग : मैदानभर मकै, कोठाभर दिसा !
Next प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई रवीको प्रश्न, ‘भ्रष्ट्राचारी उम्कीदैन भन्ने कि भटाभट समाउने ?’
काठमाडौँ- पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले हिरासतमा राख्न …
शौचालयमा फोन लैजाने बानी छ भने ग्यारेण्टी पाइल्स रोग लाग्छ कारण यस्तो छ
पाथिभरा माताको दर्सन गरि आजको राशिफल / २०७६ आश्विन २६ गते आइतबार हेर्नुहोस